Apple Inoburitsa Chechitatu Beta yewatchOS 8.3 yeVagadziri | Ndinobva ku mac
Apple Inoburitsa Chechitatu Beta yewatchOS 8.3 yeVagadziri
Sezvo Apple yatijaira nguva pfupi yadarika, vhiki mushure mekutangwa kweiyo watchOS beta, kambani yeAmerica inotanga vhezheni itsva. Panguva ino tinowana kuti chii yechitatu beta yewatchOS 8.3, hongu, yakaburitswa kune vanogadzira kuti vaedze zvinangwa. Saka kana iwe uchida kuyedza iyi nyowani yekushandisa system uchafanirwa kunge wakasaina kuApple's developer program. Unogona kugara wakamirira vhezheni yeruzhinji.
Vhiki mushure mekutangwa kwechipiri beta yewatchOS 8.3, Apple yakaburitsa kune vanogadzira iyo yechitatu edition yeiyi bvunzo vhezheni. Parizvino inongowanikwa kune avo vakasaina chirongwa chekuvandudza yekambani. Ramba uchifunga kuti ivhezheni yekuyedza uye senge ese, inogona kunge iine zvikanganiso. Saka iwe unofanirwa kuve wakajeka kana iwe uchida kudhawunirodha beta. Kana ukadaro, ita makopi ekuchengetedza ayo kana ari Apple Watch, ari otomatiki, nekuti zvirokwazvo haudi kuti mudziyo usashande. Izvi zvinonditungamira kuti ndikuudze kuti usaiise pamichina mikuru.
Parizvino haisati yawanikwa hapana chitsva mushanduro itsva iyi inova yechitatu. Hapana shanduko inowedzerwa kupfuura iyo yapfuura bug kugadzirisa uye kuvandudzwa kwezvinhu, zvirinani izvo zvatinoziva. Tichange takamirira kana chimwe chinhu chitsva chikabuda, asi parizvino zvinoita sekunge kwete. Zvikasadaro, tichaiisa mukupinda kuti tese tizive.
watchOS 8.3 inogona kutorwa pasi kuburikidza yakatsaurirwa Apple Watch app pa iPhone nekuenda kune General> Software Update. Kukwidzira kune software nyowani, Apple Watch inofanirwa kuve ne50 muzana yehupenyu hwebhatiri, inofanirwa kuiswa pajaja, uye inofanirwa kunge iri mukati meiyo iPhone.. Chimwezve chinhu. Usaibvise muchaja kana kutangazve account yainokuunzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Apple Inoburitsa Chechitatu Beta yewatchOS 8.3 yeVagadziri
Final Cut Pro inogadziridzwa kugadzirisa matambudziko mukushanda kwayo
MacOS Monterey 3 beta 12.1 ikozvino yave kuwanikwa kune vanogadzira